Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise.
Ejensichi kana kan beeksiise gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 4ffaa Magaalaa Adaamaatti wayita gaggeessa jiru dha.
Ejensichii taatewwanii bu’uura hawaasummaa galtee tarsiimoo fi Imaammataa mootummaatiif ta’an karaa qindawaa fi dhugummaan isaa mirkanaa’en itti fufiinsaan galmeessuu fi qindeessuun uummanni bu’aa ce’ii tokko malee ragaa barbaadu waayitawaa ta’ee akka argatu caasaa ejensichaa Naannoo hanga Gandaatti dirirsuun hojjacha akka jiru Daarikteerrii olaanaan Ejensichaa obboo Tashoomaa Girmaa gamaaggamicha wayita banan dubataniiru.
Hojii bu’uuraa fi faayidaa qabeesummaan isaa mirkana’aa ta’e karaa guutuu ta’een guutuu Naannoo Oromiyaa keessatti hojjatamu karoora irraa ka’ee hanga raawwii isaatti hordoffii taasissuun hojichii haala karoorfameen akka raawwatamu kurmaana kurmaanaan gamaaggamaa deemuun dhimma murteessa waan ta’eef waltajjiin kun kan qopha’ee ta’uu dabalataanis himaniiru
Waltajjiichi Gabaasa Ejensii Naannoo fi Godinaalee dhiyaatuun hanqinootaa fi ciminoonni hojii keessatti muudatan kan addaan itti bahanii fi hanqinoota uumaman maqsuun kurmaana itti aanutti muuxannoo gaarii argame babal’isuun karoora karaa guutuu fi walfakkaata ta’een raawwachuuf galteen gamaaggama kanaa hedduu barbaachissa akka ta’ee dubatani jiru.
Akkaataa gabaasni dhiyaate itti gamaaggamameen gabaasni raawwii Godina Arsii, Qeelam Wallagaa Muuxannoo cimaa ta’uun isaa kan madaalame yoo ta’u, raawwii isaanitiin sadarkaa gadii anaa qaban, kurmaana itti anuu keessatti fooyya’uu akka qabu kallattiin ka’ame jira.
Gabaasni raawwii hojii Magaalootas dhiyaatee marii taasifameen raawwiin hojii Magaalaa Mojoo, Shaashamannee fi Adaama sadarkaa fooyyee irra jiraachuu kan laalame yoo ta’u,raawwiin hojii Magaalota baay’ee keessatti hanqinaa qabu eeruun kurmaana itti aanuu keessatti akka foyyeessuu yaani itti kennamerra.
Xumuraa irratti kallattiin hojii fuula dura karaa Daarekteroota Ejensichaatiin kennuun gamaaggamichii kan raawwate jira.